Imizekelo yeziNdlobongela kwiiNgqungquthela
Ngokwakheko, indent isithuba esingenanto phakathi komda kunye nokuqala komgca weetekisi .
Ukuqala kwesi siqendu kudibene. Umgangatho wesigatshana oqhelekileyo malunga neendawo ezihlanu okanye enye kwikota kwisigamu sesentimitha, kuxhomekeke kwisiphi isiqondiso esilandelayo. Kwi- intanethi ebhaliweyo , ukuba isofthiwe sakho ayivumeli ukungena, faka isikhala somgca ukubonisa umhlathi omtsha.
Ulwahlulo lwentsimbi yokuqala lendlela ifomati ebizwa ngokuthi i- hunging indentation .
Kwi-inding yokulenga, yonke imigca yomhlathi okanye ukungena ayifakwe ngaphandle komgca wokuqala. Imizekelo yaloo hlobo lokungeniswa ifunyenwe kwiziqulatho, icacisa , iibliographies , iifrissari , kunye neendleko.
Isibhengezo kunye nesiGaba
"Ingcamango yonke yomhlathi ukukwenza izinto zibe lula kumfundi." Uyakudla ekuqaleni kwimihlathi kumqondiso, 'Hayi, Reader! Zonke iimbono ezikule mhlathi zi malunga nento efana nayo. ... Indent-intsimbi enkulu kakhulu ubuncinane isiqingatha intshi-nayo yenza izinto zibe lula emehlweni omfundi. " (UGloria Levine, i -Princeton Review Roadmap eya kwiVirginia SOL . I-Random House, 2005)
Ukusetyenziswa okugqithiseleyo kwindalo ekuqaleni komhlathi , apho umgca wokuqala uhlala unamathuba amahlanu. ... Olunye usebenziso lwentsimbi luchaza , apho kukho ukungena ngaphantsi kokungena ngaphantsi kwelokungena kwayo. Ikhutshulwa elide [okokuthi, i- quotation block ) inokuthi ifakwe kwisicatshulwa sombhalo endaweni yokufakwa kwiimpawu zokucaphuna . inokubamba i-indent enye-intshi yesiqingatha okanye izithuba ezilishumi ukusuka kumibini efanelekileyo kunye nekhohlo kwiingxelo nakwamanye amaxwebhu. " (UGerald J. Alred, uCharles T. Brusaw, kunye noWalter E. Oliu, I-Handbook Writer Handbook , umhla we-7 ku-Macmillan, 2003)
Isiqendu somhlathi siyinxalenye kunye nenxalenye yesakhiwo sendibano yonke; inikwe [inxalenye yentetho] iba ngumhlathi kungekhona ngenxa yesakhiwo sayo kodwa ngenxa yokuba umloli ukhetha ukuzithobela, ukusebenza kwakhe kokungeniswa kwempahla, njengoko kukho konke okubhaliweyo , njengengqungquthela kwinkqubo yokubhala yonxibelelwano ekhoyo ngelo xesha. Iimhlathi aziqulunqwa, ziyafumaneka.Ukudibanisa ukudala, ukukhupha ukutshintsha. " (UPolly Rodgers, Jr., "Ingxelo eXhaswa ngeNgxoxo yeSiqendu." CCC , ngoFebruwari 1966)
"Ukufomatha kwintetho kubandakanya amanyathelo athile:
* Sebenzisa amanqaku okucaphuna phambi nangemva kwamagama athetha.
* Beka iipompoti (njengexesha) ngaphakathi kwiphepha lokugqibela lokucaphuna.
* Ukuvuma xa isithethi esitsha siqala. "
(UJohn Mauk noJohn Metz, Ukubunjwa koBomi bemihla ngemihla: Isikhokelo sokuBhala , umhla wesi-5, uCengage, 2016)
"Awuzange ube nabantu beza kwaye bangabi naso ixesha lokuthenga? Kufuneka wenze ntoni na kwifriji, uCririce. Ngamana ndingabiza uClarice?"
"Ewe ndicinga ukuba ndiza kukubiza-"
"UDkt. Lecter-obonakala efanelekileyo kakhulu kwiminyaka yakho kunye nesitishi," watsho.
(Thomas Harris, The Silence of the Lambs, St. Martin's, 1988)
Imvelaphi yeSigcaziso sokuNika
"Ukugcinwa kwamagatya, ngendlela, kuvela kuloo mkhwa wabaprinta bokuqala, ngokulandela umgaqo wabalobi, okuquka ukushiya isikhala esingenanto sokufakelwa kokuqala kokuqala ngokukhanyisa." (U-Eric Partridge, Unayo Iphuzu Kukho: Isikhokelo seMpawu zokuQinisa kunye neZibambano zawo . URoutledge, 1978)
"Ngexesha leshumi elinesixhenxe elinesixhenxe, i-indent yayisisigxina esifanelekileyo somhlathi kwi-prose yaseNtshona. Ukunyuka kokunyathelisa kwakhuthaza ukusetyenziswa kwesithuba ukulungiselela izicatshulwa. i-slug yesikhokelo kunokuba iguqule ngokubhaliweyo. " (U-Ellen Lupton noJ. Abbot Miller, uyilo, ukubhala, uphando, i- Princeton Architectural Press, 1996)
Yintoni Eyichukumisayo Yokuqiqa?
10 Iibhulogi zoBuglobho eziFundelweyo
Abafazi bokuqala baseMerika
I-Amphiboly kwiGrama kunye neLogic
Indlela Yokufumana I-Apart-Campus Apartment
Nguwe Oko Ucingayo-IMizekeliso 23: 7